२५ वर्षकी युवतीले पासो लगाएर गरिन आत्महात्या, के थियो कारण ? - ramechhapkhabar.com
२५ वर्षकी युवतीले पासो लगाएर गरिन आत्महात्या, के थियो कारण ?
आज बिहान ललितपुरमा युवती झुण्डिएकी छन् । ललितपुरको त्यागलस्थित भाडाको घरमा बस्दै आएकी युवतीले छतमा पासो लगाएकी हुन् । काभ्रे घर भई हाल ललितपुरमा बस्दै आएकी २५ वर्षकी अनिशा भुजेल आज बिहान साढे चार बजेको समयमा झुण्डिएकी प्रहरीले बताएको छ । उनी छतको पाइपमा सलको पासो लगाएको अवस्थामा मृत भेटिएकी हुन् ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।विश्वासको मत लिने प्रयोजनका मंगलबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रदेशसभा बैठक सुरू भएलगतै सभामुख राजबहादुर शाहीले संसद आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए । त्यसलगतै सरकारमा मन्त्रालयको जिमेवारी हेरफेर सम्बन्धी पत्र सुनाएर सभामुख शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत माग्ने समय दिए ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव पेस गरेलगतै बैठक स्थगित गरिएको छ । बैठक आज बुधबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरु अनुपस्थित भएपछि बैठक भोलीका लागि स्थगित गरिएको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले बताए । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको समर्थनमा कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।